ဘောလုံး နဲ့ အချစ်ဆုံး | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အမဆီကဖတ်ပီးတာနဲ့ ပြုံးဖြဲဖြဲဖြစ်သွားတာ အမြဲပဲ။
အမက အဲ့သလောက်တောင် ရီစရာလေးစွက်ပီး စာရေးတတ်တယ်နော်..။
မိန်းကလေး ဘောလုံးပွဲဝါသနာအိုးက ရှားပါတယ်။ အမရဲ့..။
မြတ်နိုးတို့လဲ ၃ တန်းရောာက်မှ အသေအချာ ဘောလုံးပွဲကို အားပေးဖြစ်ရင်းနဲ့ ပိုးဝင်သွားတာပါ။ ခုတော့လဲ ဘာဖလားညာဖလား မှာ ကွာတာဆီမီးနဲ့ ဖိုင်နယ်လောက်ပဲ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲက အဖော်နဲ့ ကြည့်မှ ကောင်းတာ..အမရဲ့။ ဘေးကနေထိုင်ပီး တခုပီးတခုစားပီးအားပေးလိုက်ပါ
ကျနော်ကတော့ ခွေးသားကင်ပဲပြောပြော ဘာပဲပြောပြော၊ ဘောလုံးပွဲမှာရောင်းတဲ့ "ဆိတ်သားကင်" ကို ဘောလုံးပွဲထက် ပိုမက်ခဲ့တယ်။ ရှောက်သီးစိပ်ကလေးကို အရည်ထွက်ထွက် မထွက်ထွက် အကင်ပေါ်က ပွပ်လိုက်ပြီး လက်မလောက် ကြက်သွန်စိတ်ကလေးကို အရင်ကိုက်စားလိုက်တာပဲ။
အစ်မ .. ဒီဝတ္ထုလေး အရမ်းကြိုက်တယ်..ညီမလည်း ဘောလုံးပွဲဆို တော်တော်လေးဝါသနာပါတယ်.. ဘာလိုလိုနဲ့ မနက်ရုံးရောက်ရောက်ချင်း စဖွင့်မိတဲ့ ဘလော့က အစ်မဘလော့ဖြစ်နေပြီ အစ်မရေ..
ဒီဝတ္ထုလေး အရင်က ဖတ်ဖူးတယ်။ ပြန်ဖော်ပြပေးတော့ ပြန်ရယ်ရတာပေါ့။ ဟီး။
ကိုသာဝိုက်နဲ့ မသူဇာ အိမ်ထောင်ကျသောခါ
တလင်းပြောင်အောင်လျှက်တယ်လေး။ ... ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို သတိရမိပါတယ်။ (မှတ်ထားတာ နည်းနည်းလွဲရင်လွဲမယ်)
ဟိုတခါက သက်ဝေပြောတာ အဲဒီဝတ္ထုလေးပေါ့...။
သိပ်ကောင်းတာဘဲ..။ ပြန်ဖေါ်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်...။
အမရေ စက်ထဲမှာ fontတွေပျောက်ကုန်လို့ငြိမ်နေတာ။ ခုတော့ပြန်ကောင်းသွားပြီ။ လာရီတော့နော်။ဒီဝထ္ထုလေးကိုမှတ်မိတယ်း)
My husband likes Chinese Movie Series (Thaing Kar) heartily and he used to dream of "Na Ga Naing Dar"and "Tain Hlar Dar".
He can watch his movies for4hours continuously.I m not interested in the names,Koe Shwe,Kyan Wu Kyee,Shaung Lin Gang, Wu Tan Gang etc.which he always he says.I like Korean Movies and songs.
I can share ur feelings.:P
အမရေ.... ဒီဟာကို အလုပ်မှာတုန်းက ဖတ်ပြီး အသံမထွက်အောင် မနေနိုင်ပဲကို ရယ်မိတယ် ။ အလုပ်ဆိုတော့ အသံအကျယ်ကြီး မထွက်ရဲ ။ ခွိ ခွိ ပေါ့လေ အဟီ ။
ရယ်ချင်ရင် ညီမရဲ့ "awkward moments" လေဘယ်လ်အောက်က တချို့လာဖတ်ကြည့်ပါလား ။ တချို့ က ရယ်ရတယ် ထင်တာပဲ ။ တကယ်ဖြစ်တဲ့ ညီမအတွက်တော့ ကိုးလိုးကန့်လန့်ပေါ့လေ ။
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ အရင်ကထဲက ဖတ်ဖူး ကြိုက်ဖူးပါတယ်။
မနေ့က မန်ယူသရေကျလို့ ဟတ်ထိနေတာ၊ ဒီတပုဒ်ဖတ်လိုက်မှ နည်းနည်းစိတ်ပြေသွားတယ်။
ငါ့လေဒီကတော့ ရှင့်ယောက်ဖတွေတဲ့၊ မမှုပါဘူး ငါ့မှာမှ ညီမ မ၇ှိတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်တွေ ညီမဆို တော်တော်အရုပ်ဆိုးမှာ ယူချင်ပါဘူး။
good ထ good ထ မမိုးချိုသင်းရေ ဆွဲသွားပြီ ဘောလုံး
မရေးဘဲမနေနိုင်တော့လို့ ရေးလိုက်ဦးမယ် ညီမက အမထက်ဆိုးတယ် သိလား။ မန်းအောက်ဆိုတာကို သေချာ ပြူးပြဲရှင်းပြတာတောင် ခုထိမသိသေးဘူး။ ငယ်ငယ်က ဘောလုံးသမားတွေ ခေါက်ဆွဲကြော်ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားတာကို တွေ့တော့ အဖေ့ဆီပြေးပြီး “ပါပါရေ ဘောလုံးသမားတွေ ခေါက်ဆွဲစားနေကြပြီ” ဆိုပြီး အလန့်တကြားသွားလုပ်လို့ ဆူခံရဖူးတယ်။ အဲဒီလိုလူ ဆုံမိတဲ့ဖူးစာရှင်ကလည်း အမ ရဲ့ ကိုကိုထက် မသာတောင် လျော့မယ်မထင်ဘူး သူ့ ချက်ဘောက်စ်မှာ ခုတင်ထားတာပဲကြည့် “မန်ယူ ၃ ဝါထိ... သရေ..၁..၁...နဲ့ ပွဲဦးထွက်မှာလှတယ်” တဲ့။ ဘာတွေမှန်းမသိပါဘူး။
အမရေးတာတွေက ရိုးရိုးလေး… ဖတ်လို့တကယ်ကောင်း… ရီလည်းရီရ.. တကယ်အဖြစ်အပျက်ဆိုတော့လည်း ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်…
အမ မှတ်ချက်ပေးသွားတာကို မေမေကို ကြွားလိုက်တော့၊ နေပြည်တော်ကျောင်းမှာ အတူလုပ်တုန်းက သူမှတ်မိတဲ့ ဆရာကြီးတင်မိုးအကြောင်း ရေးပေးမယ် လို့ပြောတယ်..း)
ဘာမှ မတင်ထားပါလား။ နေမကောင်းဘူးလား။ အလုပ်များနေလား။ဘောလုံးပွဲကိုက်နေတာလား။ဘာတခုမှ မဟုတ်စေ။
ဒီဝတ္ထုလေးက မ လက်ရာထဲက အမြဲမှတ်မိနေတဲ့ ၀တ္ထုလေးပေ့ါ… အဲဒီတုန်းက
ကြိုက်လွန်းလို့ နှစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ခဲ့တာ… ခုလိုပြန်တင်တော့လဲ ဖတ်လို့ ကောင်းတုန်းပဲ… ဒီမှာလဲ မ လို ဘောလုံးနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတယ် မ ရေ… မ ပြောတဲ့ အတိုင်း တကယ့်ကွက်တိ…
ကျနော်လဲ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာကို အသေအလဲ နှစ်သက်တဲ့ အထဲမှာပါတယ်။ ၀တ္ထုတိုလေးက ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အမရေ...။ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ရင်းနဲ့လဲ ကျနော် အားပေးတဲ့ အသင်းနာမည်တောင် ထ အော်ချင်လာတယ်။ :D
မမိုးချိုသင်းရေ ဒီဝတ္ထုလေးကို အရင်ကဖတ်ဖူး ပြီး ပြုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အရင်ကတော့ တကယ့် ၀တ္ထုသက်သက် ထင်ခဲ့တာ။ ခုတော့ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ပေါ့နော်။ ခုလည်း ဖတ်ပြီး ပြုံးမိပြန် ပါတယ်။
ဖတ်ရင်းပြုံးမိပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ဘောလုံးကို အဲဒီလောက်ထိဝါသနာမပါပေမဲ့ ဘောလုံးဝါသနာအိုးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေရသူမို့ အဲဒီခံစားချက်လေးကိုကောင်းသိခဲ့ပါတယ်။